Izindaba - Ukubhoboza ohlangothini olude lokuqala lwaseChina “umgodi owodwa, ukuhudula kabili” ohlangothini lokukhomba kudlule ngempumelelo
Ukushayela ohlangothini lokuqala lwaseChina “umgodi owodwa, ukuhudula kabili” okuqondisayo kudlule ngempumelelo
Ukubhola kwesikhombisi-ndlela sokuqala seChina “semgodi owodwa, sokuhudula kabili” kuphumelele ngempumelelo
Ngo-Agasti 11, umbhali wafunda kwiLiaohe Oil Construction First Company Crossing Engineering Company ukuthi ukuqhuma kokuqondisa kweQinghe kokubhida kwesihlanu kweprojekthi yamapayipi kawoyela ongahluziwe eDaqing-Jinxi (isigaba seChuiyang-Tieling) okwenziwe yile nkampani kuphumelele, kwafezeka ukukhula kokuqala kwesikhathi eside eChina. I-drill eqondisayo idlula kusuka ku- "hole-double-drag-drag".
Iphrojekthi yokuwela iQinghe itholakala cishe emakhilomitheni ama-2 enyakatho ne-Anyemin Village, i-Yemin Town, iDolobha laseKaiyuan, iSifundazwe saseLiaoning. Kungumsebenzi wokwakha ukubhola okuqondiswa ngasikhathi sinye ngepayipi likawoyela elinobubanzi obungu-813 mm kanye nekhebula lekhebula elibonakalayo elinobubanzi obungu-114.3 mm.Isakhiwo se-geological sendawo yokwakha siphethwe izingqimba zamatshe kanye nodaka. Ingxenye yokuwela imigwaqo eqondisayo ingamamitha ayi-1625 ubude futhi ingeyephrojekthi enkulu yokuwela umfula.
Ukuze kuqedelwe umsebenzi wokuwela umfula ngesikhathi, ukwakhiwa koMnyango Wephrojekthi We-Dajin Pipeline weNombolo 1 Ukwakhiwa koMfula iLiaohe kuhlelwe ngokwesayensi ukumelana nokushisa okuphezulu nokushisa. Inobunzima obuningi njengokuphikisana okuphezulu, umugqa ongalingani futhi othambile, futhi uwenze ngempumelelo umsebenzi wokudonsa. Azange kube khona mkhuba odakeni owenziwayo, owanconywa kakhulu ngabanikazi, ukugadwa nohulumeni wasekhaya.